Warshadda Taranka ka Taranta | Soo-saareyaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Bacriminta
Aaladda Qashinka Gaaska EO
Iyadoo loo marayo soosaarayaasha heerkulka sare, mashiinka daaweynta gaaska 'ethylene oxide' wuxuu u baabi'in karaa gaaska EO gaaska kaarboon dioxide iyo uumiga biyaha oo si toos ah loogu sii daayaa banaanka, iyada oo aan loo baahnayn in la rakibo dhuumaha dheecaanka sareeya. Waxtarka kala-baxa ayaa ka sarreeya 99.9%, taas oo si weyn u yareysa qiiqa 'ethylene oxide'.
Daawada Jeermiska 'Etylene Oxide'
Daawada nadiifinta taxanaha ah ee 'XG2.C' waxay qaadataa 100% ethylene oxide (EO) gaas oo ah dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo jeermis-ka-dhigista aaladda caafimaadka, qalabka indhaha, iyo qalabka elektaroonigga ah ee caafimaadka, balaastigga iyo agabyada caafimaad ee aan u adkeysan karin heer-kulka sare iyo nadiifinta qoyan.
SHINVA Plasma sterilizer waxay u qaadataa H202 inay tahay wakiilka nadiifinta waxayna sameysaa xaalad plasmatic ah H202 aag elektromagnetic ah heerkulka hoose. Wuxuu isku daraa labada gaas iyo Hsl2 ee dhirtu ka samaysan tahay si looga dhigo jeermis nadiifinta alaabta ku jirta qolka isla markaana loo baabi'iyo haraaga H202 ka dib marka la nadiifiyo.